Howlgal dad lagu qab qabtay oo laga sameeyay Boosaaso | Dayniile.com
Home Warkii Howlgal dad lagu qab qabtay oo laga sameeyay Boosaaso
Saacadihii la soo dhaafay Howlgal uu hoggaaminayay Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari G/Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa laga sameeyay Magalada Bosaaso iyo qaar badan oo ka tirsan xaafadaha magaalada si loo adkeeyo amaanka.
Howlagalkaan oo ahaa kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa meelaha qaar waxay ciidamadu u sameynayeen guri-guri,iyo Hoteelo, waxaana u ahaa mid ka dhan ah Xoojinta amaanka iyo Burcadda dadka shacabka ah ka furata agabkooda.
Ciidamada ammaanka ayaa inta ay ku jireen howlgalkawaxaa u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigaan dad ku howlanaa falal lidi ku ah amaanka.
Habeenadii lasoo dhaafay waxay ciidamada magaalada Bosaaso ka wadeen howlgallo culus oo ka dhan ah burcadda dhalinyarada ah, waxaana weli socda howlgalladaas sida lagu sheegay War kasoo baxay Booliska Gobolka Bari.
Howlgalkaan ayaa wuxuu ku soo aadayaa, iyada oo dalku uu galay xilli doorasho, isla markaana hey’adaha ammaanka Gobalka Bari ay muujinayaan feejignaan d
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ku dhawaaqay dagaal horleh
Next articleCiidamada Ahlussunna ee Galmudug kula dagaalay GURICEEL oo maanta Mushaar loo qeybiyey
Dowlada Bulgaria ayaa ka iibisay Ethiopia, soona raacisay ciidankii ridi lahaa, madaaficda ridada dheer ee taangiyada specialka ah ku rakiban. Hubkan ayaa ab midkii...
Ciidanka PSF oo maanta gargaar gurmad ah gaarsiiyey Shacabka ku haray...
Dadka Muqdisho oo caawa Cabsi ku jira iyo warqada Wiiftada saqdhexe...
DEG DEG: Madaxtooyada: Amar laga bixiyay xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu faray...
Kazakhstan oo xabsiga dhigtay madaxii hore ee sirdoonka oo lagu eedeeyay...